Barcelona oo Ka Badisay Kooxda Deportivo iyo Messi oo hat-trick Dhaliyay “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kooxda Deportivo de La Coruña ayaa waxaa garookeeda Estadio Riazor 0-4 uga badiyay kooxda Barcelona.
Ciyaaryahan Lionel Messi ayaa caawo sedax gool hat-trick u dhaliyay kooxda Barcelona.
Ciyaaryahan Messi ayaa kooxda Barcelona u dhaliyay hat-trick-giisii 22-aad ee horyaalka Spain ee La Liga.
Ciyaaryahan Messi ayaa 30- hat-trick u dhaliyay kooxda Barcelona intii uu u ciyaarayay.
Ciyaaryahan Lionel Messi ayaa noqday ciyaaryahankii labaad ee koox Spanish u dhaliyay 30- hat-trick,waxana horey u dhaliyay ciyaaryahan Telmo Zarra.
Ciyaaryahan Messi ayaa 19-gool ku dhaliyay 19-kulan oo u ciyaaray kooxda Barcelona Horyaalka Spain ee La Liga.
Kooxda Barcelona ayaa horyaalka Spain ee La Liga uga jirto kaalinta labaad,waxana ay leedahay 44-dhibcood,halka kooxda Deportivo de La Coruña ay horyaalka uga jirto kaalinta 17-aad,iyadoo leh 17-dhibcood.